गृहपृष्ठ » फिचर » घरमा एक टुक्रा कपडा नभेटिएपछि ७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सुताएर स्लाइन दिदैँ
शुक्रबार १२ मङ्सिर, २०७७
भोजपुर । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका ३ खार्तम्छा चिचिला निवासी ७७ वर्षीय रामबहादुर राईको परालको ओछ्यानमा राखेर स्लाइन पानी दिइएको तस्विर भाइरल भयो । कतिले उक्त तस्विरलाई बनावटी पनि भने । तर यो सत्य हो ।
खार्तम्छा निवासी ७७ बर्षिय राईलाई परालमा सुताएर स्लाइन पानी दिइएको झुटो हैन साँचो हो । उनी दशैं अगाडिदेखि बिरामी थिए । उनको घरमा उपचारका लागि ओछ्याउने एउटा तन्ना पनि छैन । मंसिरको जाडोमा उनी सुत्ने ठाँउमा पराल बाहेक केही थिएन ।
नगरले निशुल्ल घर बनाइ दिने
जीर्ण घरमा बस्दै ७७ बर्षिय राईलाई षडानन्द नगरपालिकाले नयाँ बनाइ दिने भएको छ । यो तस्विर बाहिरिएपछि नगरले चासो दिएको छ । उनलाई नगरले चाडै निशुल्क घरको पनि ब्यवस्था गरेर नयाँ घरमा सार्ने षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरिका राईले जानकारी दिएकी छन् । नगरपालिकाले ७७ बर्षिय बृद्धलाई नयाँ घरमा राख्न खार्तम्छाकै स्थानियलाई घर बनाउने जिम्मा दिएको उपमेयर राईले जानकारी बताइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ७७ वर्षीय बृद्ध राईको परालमा राखेर स्लाइन पानी दिइरहेको फोटो देखेपछि अवस्था बुझ्न षडानन्द नगरपालिकाका मेयर बीरबल राई र उपमेयर मेरिका राई बुधबार खार्तम्छा पुगेका थिए ।
स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन बुधबार साँझ खार्तम्छाको चिचिला पुगेको षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरिका राईले जानकारी दिएकी छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा पराल माथि राखेर स्लाइन पानी दिइरहेको फोटो बनावटी नभइ बास्तविक फोटो हो ।’ उपमेयर राईले भनिन् ।
जाडो मौसममा ७७ वर्षीय बृद्ध त्यसमा पनि विरामी भएको अवस्थामा परालमा सुतेको देखेपछि मेयर र स्वास्थ्यकर्मीको टोली खार्तम्छा पुगेको उपमेयर राईले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले उनलाई खाद्यान्य,लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ ।
अहिले बृद्ध राईको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको खार्तम्छा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ । ७७ बर्षिय वृद्ध राईलाई खार्तम्छा स्वास्थ्य चौकीको निगरानीमा छिमेकी कटेरोमा सारेर उपचार गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्धारा राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन पेश
सडकवत्ती जडान गर्न खम्बामा चढेका मजदुरलाई करेन्ट लागेर बेहोस
भारी हिमपातले विमान नै छोपिदिएपछि…
दैनिक १५ हजारसम्म मान्छे घुम्न आउने छातागल्ली बन्द [२४ तस्बिर हेर्नुहोस्]
२४ तलाको धरहरा निर्माण अन्तिम चरणमा [फोटो फिचर]
नयाँ वर्षको स्वागतका लागि ठमेलमा यसरी हुँदैछ तयारी [१७ तस्बिरमा हेर्नुहोस्]
जङ्गलमा लागेको आगो फैलिँदै पुग्यो साक्षत देवी पाथीभरा मन्दिरसम्म
चिनियाँ उपमन्त्री झर्दा विमानस्थलमा देखिएको दृश्य तस्बिरमा हेर्नुहोस्
प्रधानमन्त्री मनमोहनले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले पुर्नस्थापना गर्दाको फैसला कस्तो थियो ? [फैसलाप्रतिसहित]
दुर्घटनाबाट भाग्यवश बच्यो यात्रु बस
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले राजपाठको मर्यादा राख्नुभयो [४ तस्विर]
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीका तीन अवतार
चिसोले जमेको झरना
आहा ! धौलागिरिको फेदीमा नीलिबराह ताल
लाश व्यवस्थापनमा सैनिक महिला